Musharixiinta Isu soo taagaya Xilka madaxweynaha Somaliya oo sii kordhaya. – SBC
Musharixiinta Isu soo taagaya Xilka madaxweynaha Somaliya oo sii kordhaya.
Muqdisho- Waxaa magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalkan Soomaaliya ku soo badanaya raga la hadlaya qalabka warbaahinta ee ka sheegaya in ay u taaganyihiin doorashada xilka madaxweyne nimada Dowlada Soomaaliya, marka la gaaro bisha August ee sanadkan 2011.
C/laahi Sh Xasan oo ah siyaasi ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn loogaga yaqaan magaalada Muqdisho, waxaanu qeyb ka yahay xisbi dhowaan lagu aas aasy magaalada London oo lagu magacaabo Nabad iyo Horumar, waxaanu sheegay in uu u taagan yahay doorashada xilka madaxweyne nimada DKMG ah ee Soomaaliya .
Horay ayaa waxaa uu u shaaciyay sidoo kale madaxweynaha Iminka ee dowlada KMG ah Shariif Sh Axmed in uu u taagan yahay xilka madaxweyne nimada marka la gaaro doorashada.
Waxaa iyana soo shaacbaxa siyaasiyiin kale oo isu soo sharacay xilka madaxweynaha dowlada KMG ah, kuwaasi oo badigoos ku sugan dalka dibadiisa, waxaana ka mid ah C/laahi Axmed Cadow oo isagu ah siyaasi marar hore isu sootaagay xilkan Madaxweyne nimo.
Marka laga yimaado isa soo sharixitaanka siyaasiyiintan ayaa hadana waxaa jira kulamo ay isugu imaadeen golaha wasiirada DKMG ah kuwaas oo waxba jiraan ku tilmaamaya in asan suuro gal aheyn waxyaaba ay ku dhaqaaqayaan siyaasiyiinta isku soo sharaxay xilka madaxweyne nimo islamarkaana ay Dowlada haatan jirtaa ay dhimantahay waqtigii ay dhici laheyd.
Waxaa iyana ka jawaab bixiyay hadalka golaha wasiirada gudiga qaban qaabada doorashooyinka oo u badan xubno ka socda baarlamanka kuwaas oo sheegay in aanay dheg u dhigeynin hadalada golaha wasiirada ka soo baxaya islamarkaana ay halkeedii ka sii socon doonto is diiwaan gelinta doorashada.